Amasu Wokuphumelela kuTwitter | Martech Zone
Amasu wokuThumela Okuphumelelayo
NgoLwesithathu, Agasti 1, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngiyayithanda imininingwane ekulo mbiko evela kuBuddy Media kanye ne-infographic evela kuFusework Studios. Imininingwane ikhomba amathuba amabhizinisi okufanele ahlanganyele nawo namakhasimende lapho etholakala, acele abalandeli bawo ukuthi bathathe izinyathelo, futhi bagcine umyalezo ulula. Vele, ngihlala ngikhuthaza amaklayenti ethu ukuthi ahlole futhi alinganise, nawo. Mhlawumbe izimbangi zakho azibhaleli i-tweet ngezimpelasonto - kungaba yisikhathi esikahle sakho sokuthola ukunakwa okuthile.
Uma ungathanda ukubona yonke idatha engemuva kwe-infographic, landa umbiko kaBuddy Media ogcwele, Amasu Wokusiza Nge-Tweeting Okusebenzayo: Ukubuyekezwa Kwezibalo. Futhi, qiniseka ukuthi uhlola i-infographic yethu ku- izizathu zokuthi ungalandelwa ku-Twitter!
Tags: ama-fuseworks studioswandise ama-tweets akhoTwitter
I-Buddy Media kanye ne-Salesforce Marketing Cloud
I-ROI Yezokuxhumana Komphakathi
UJohn D. Fisher
Aug 1, 2012 ngo-4: 24 PM
Siyabonga ngokwabelana nge-infographic yethu kusayithi lakho, uDoug. Siyakwazisa ngempela!